Public profile Real Estate Home | 24 Naryee
စာရင်းသွင်းပြီးသူ	28 ဖော်ပြချက်များ
6400 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( စိမ်းလဲ့ရိပ်သာလမ်း၊ Micasa အနီး ၊ ရန်ကင်း ) Sein Lei Yeiktha Street, near Micasa, ရန်ကင်း, ရန်ကုန်, Yangon Region 8 အိပ်ခန်းများ5ရေချိုးခန်း 8 အခန်းစုစုပေါင်း * အကျယ်အ၀န်း - 6400 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - ရန်ကင်း ၊ စိမ်းလဲ့ရိပ်သာလမ်း၊ Micasa အနီး * မာစတာအိပ်ခန်း4ခန်း * ရိုးရိုးအိပ်ခန်း4ခန်း * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - နှစ်ထပ်အာစီ တိုက်အိမ် * သက်တောင့်သက်သာစွာအနားယူနေထိုင်နိုင်ရန် လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ပြီး * လိုင်းဖုန်း * ရန်ကင်းမြို့ နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုသော နေရာဖြစ်သလို .. ဈေးဝယ်ထွက်ရန်အတွက်လည်း ရန်ကင်းစင်တာ နှင့် နီးသော နေရာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ တစ်လ ငှားရမ်းခ (အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားထံမှ) ရေချိုးခန်း5မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 6400 ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable (ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်) အိပ်ခန်းများ 8 လူနေဧရိယာ (ft²) 6400 အခန်းစုစုပေါင်း 8 အိမ်ခြံမြေ ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: လသာဆောင် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်လက္ခဏာ: ရေတိုင်ကီ အခြားသော အားသာချက်များ: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးနိုင်သည် Contact : Shwe Minn Themee Address : No. 157/169, A4, 36th Street, Middle block, Kyauktada Township, Yangon
1300 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( (၉)မိုင်၊ အေ၀မ်းလမ်း ၊ မရမ်းကုန်း )9Miles, A1 Street, မရမ်းကုန်း, ရန်ကုန်, Yangon Region3အိပ်ခန်းမျာ3းရေချိုးခန်း5အခန်းစုစုပေါင်း * အကျယ်အ၀န်း - 1300 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - မရမ်းကုန်း ၊ (၉)မိုင်၊ အေ၀မ်းလမ်း * မာစတာအိပ်ခန်း2ခန်း * ရိုးရိုးအိပ်ခန်း 1 ခန်း * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - အာစီ တိုက်အိမ် * လေအေးပေးစက်4လုံး * ရေပူရေအေးစနစ် * လိုင်းဖုန်း * မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး * ပရိဘောဂအစုံအလင် ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင် * ကားဂိုထောင် * ကိုယ်ပိုင် မီး ( မီတာ ) * ကိုယ်ပိုင် ရေမီတာ * မြေကွက်အား တံတိုင်းခတ်ကာရံထားပြီး * မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်အတွင်း တွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူသော မြို့ နယ်တွင် တည်ရှိသလို .. ဈေးဝယ်ထွက်ရန်အတွက်လည်း သမိုင်း City Mart , ၈ မိုင် Junction 8 , ၉ မိုင် Ocean Shopping Mall တို့ နှင့်လည်း မလှမ်းလှသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ တစ်လ ငှားရမ်းခ (အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားထံမှ) ရေချိုးခန်3းမြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 2500 ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable အိပ်ခန်းမျာ3းလူနေဧရိယာ (ft²) 1300 အခန်းစုစုပေါင်း5အိမ်ခြံမြေ ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များ အတွင်းပိုင်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: အဆင့်မြင့်သန့် စင်ခန်းပါဝင်သည့်အိပ်ခန်း လေအေးပေးစက် အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: သီးသန့် ကားဂိုထောင် လုံခြုံသောကားရပ်နားရန်နေရာ လသာဆောင် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်လက္ခဏာ: ရေတိုင်ကီ အခြားသော အားသာချက်များ: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးနိုင်သည် Contact : Shwe Minn Themee Address : No. 157/169, A4, 36th Street, Middle block, Kyauktada Township, Yangon
2100 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( (၇)မိုင်၊ ဦးလွန်းမောင်လမ်း ၊ မရမ်းကုန်း ) (7)Miles, U Lunn Mg Street, မရမ်းကုန်း, ရန်ကုန်, Yangon Region4အိပ်ခန်းမျာ3းရေချိုးခန်6းအခန်းစုစုပေါင်း 2100 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( (၇)မိုင်၊ ဦးလွန်းမောင်လမ်း ၊ မရမ်းကုန်း ) * အကျယ်အ၀န်း - 2100 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - မရမ်းကုန်း ၊ (၇)မိုင်၊ ဦးလွန်းမောင်လမ်း * မာစတာအိပ်ခန်း2ခန်း * ရိုးရိုးအိပ်ခန်း2ခန်း * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - အာစီ တိုက်အိမ် * လေအေးပေးစက်3လုံး * ရေပူရေအေးစနစ် * မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး * ပရိဘောဂအစုံအလင် ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင် * ကိုယ်ပိုင် မီး ( မီတာ ) * ကိုယ်ပိုင် ရေမီတာ * မြေကွက်အား တံတိုင်းခတ်ကာရံထားပြီး * မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်အတွင်း တွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူသော မြို့ နယ်တွင် တည်ရှိသလို .. ဈေးဝယ်ထွက်ရန်အတွက်လည်း သမိုင်း City Mart , ၈ မိုင် Junction 8 , ၉ မိုင် Ocean Shopping Mall တို့ နှင့်လည်း မလှမ်းလှသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ တစ်လ ငှားရမ်းခ (အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားထံမှ) ရေချိုးခန်3းမြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 3075 ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable (ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်) အိပ်ခန်းများ4လူနေဧရိယာ (ft²) 2100 အခန်းစုစုပေါင်6းအိမ်ခြံမြေ ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: လုံခြုံသောကားရပ်နားရန်နေရာ လသာဆောင် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်လက္ခဏာ: ရေတိုင်ကီ အခြားသော အားသာချက်များ: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးနိုင်သည် Contact : Shwe Minn Themee Address : No. 157/169, A4, 36th Street, Middle block, Kyauktada Township, Yangon
4050 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( ဣစ္ဆိတံအိမ်ရာ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ) * အကျယ်အ၀န်း - 4050 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ဣစ္ဆိတံအိမ်ရာ * မာစတာအိပ်ခန်3းခန်း * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - နှစ်ထပ်အာစီ တိုက်အိမ် * လေအေးပေးစက်6လုံး * လိုင်းဖုန်3းအိပ်ခန်းများ4ရေချိုးခန်3းအခန်းစုစုပေါင်း * သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး တည်နေရာအနေအထားအရ သွားရေးလာရေးလွယ်ကူသော နေရာကောင်းတွင် တည်ရှိသလို .. ဈေးများ ၊ ကျောင်းများ ၊ Shopping Center ကြီးများသို့ လည်း မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအရောက်သွားနိုင်သောနေရာ ၊ သင့်တင့်ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှိသော နေရာကောင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ ( လိုအပ်ပါက ဖြည့်ပါ ) တစ်လ ငှားရမ်းခ (အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားထံမှ) ရေချိုးခန်း4မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 4050 အခန်းစုစုပေါင်3းဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable (ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်) အိပ်ခန်းမျာ3းလူနေဧရိယာ (ft²) 4050 စတင်ဝယ်ယူ/ငှားရမ်းနိုင်မည့် အချိန် Now Available အိမ်ခြံမြေ ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: လသာဆောင် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်လက္ခဏာ: ရေတိုင်ကီ အခြားသော အားသာချက်များ: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးနိုင်သည် Contact : Shwe Minn Themee Address : No. 157/169, A4, 36th Street, Middle block, Kyauktada Township, Yangon
6000 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( ၈ မိုင်၊ မောရ၀တီလမ်း ၊ မရမ်းကုန်း )5အိပ်ခန်းများ4ရေချိုးခန်း5အခန်းစုစုပေါင်း 6000 ft² ငှားမည့် လုံးချင်းအိမ် ( ၈ မိုင်၊ မောရ၀တီလမ်း ၊ မရမ်းကုန်း ) * အကျယ်အ၀န်း - 6000 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - မရမ်းကုန်း ၊ ၈ မိုင်၊ မောရ၀တီလမ်း * မာစတာအိပ်ခန်3းခန်း * ရိုးရိုးအိပ်ခန်း2ခန်း * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - နှစ်ထပ်အာစီ တိုက်အိမ် * လေအေးပေးစက်6လုံး * လိုင်းဖုန်း * မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး * ပရိဘောဂအစုံအလင် ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင် * မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်အတွင်း တွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူသော မြို့ နယ်တွင် တည်ရှိသလို .. ဈေးဝယ်ထွက်ရန်အတွက်လည်း သမိုင်း City Mart , ၈ မိုင် Junction 8 , ၉ မိုင် Ocean Shopping Mall တို့ နှင့်လည်း မလှမ်းလှသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ ( လိုအပ်ပါက ဖြည့်ပါ ) တစ်လ ငှားရမ်းခ (အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားထံမှ) ရေချိုးခန်း4မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 6000 ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable အိပ်ခန်းများ5လူနေဧရိယာ (ft²) 6000 အခန်းစုစုပေါင်း5အိမ်ခြံမြေ ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: လသာဆောင် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအသွင်အပြင်လက္ခဏာ: ရေတိုင်ကီ အခြားသော အားသာချက်များ: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မွေးနိုင်သည် Contact : Shwe Minn Themee Address : No. 157/169, A4, 36th Street, Middle block, Kyauktada Township, Yangon
2400 မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 2400 ft² ရောင်းမည့် မြေကွက် (40'*60' ဟုန်ပန်းလမ်း ၊ ချမ်းမြသာစည် ) * အကျယ်အ၀န်း - 2400 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - ချမ်းမြသာစည် ၊ ဟုန်ပန်းလမ်း * အမျိုးအစား - အခြားအမျိုးအစားများ * ချမ်းမြသာစည် မြို့ နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူသော နေရာဖြစ်သလို တည်နေရာအနေအထားအရ တန်ခိုးကြီး မန်းလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး နှင့်မလှမ်းသလို အနားယူအပန်းဖြေရန် မန်းလေးကန်တော်ကြီး ၊နာမည်ကျော်ဦးပိန်တံတားတို့ နှင့်နီးသလို ဈေးဝယ်ထွက်ရန် Ocean Super Market နှင့်လည်း နီးသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ ( လိုအပ်ပါက ဖြည့်ပါ ) တန်ဖိုး ၏ ၂ % (ရောင်းသူထံမှ) စတင်ဝယ်ယူ/ငှားရမ်းနိုင်မည့် အချိန် Now Available အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြေအနေအထားရှိခြင်း No ရေသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ No ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 2400 အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားခြင်း/ခြံခတ်ကာရံထားခြင်း No မီတာဘောက်စ် ( လျှပ်စစ်မီး ) ပါဝင်ခြင်း No ရေကြည် ရေသန့် တွင်း No
5850 မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 5850 ft² ရောင်းမည့် မြေကွက် ( ၂၆ B လမ်း နာရီစင် အနီး ၊ ချမ်းအေးသာဇံ ) * အကျယ်အ၀န်း - 5850 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - ချမ်းအေးသာဇံ ၊ ၂၆ B လမ်း နာရီစင် အနီး * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - အခြားအမျိုးအစားများ * မန္တလေးမြို့၏ အချက်ချာအကျဆုံးဈေးချိုနာရီစင်အနီး၊၂၆ Bလမ်းမပေါ် ရှိသောကြောင့် ဘဏ်၊ကုမ္မဏီ၊ဆေးရုံဆေးခန်းဖွင့်ရန်သင့်တော်သောမြေနှင့်အဆောက်အဦး ဖြစ်ပြီး၊ပေ ၆၅*၉၀ရှိသည်၊ဘိုးဘွားပိုင် ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူများ အဆင်ပြေစေရန်စပါရှယ် ပတ်ကားစာချုပ်များတွင် မူလပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပေးပါမည်။ * ချမ်းမြသာဇံ မြို့ နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူသော နေရာဖြစ်သလို တည်နေရာအနေအထားအရ မန်းလေးမြို့ ၏ အချက်အချာအကျဆုံးမြို့ နယ်ဖြစ်သည့်အပြင် ဈေးချိုတော် ၊ မန်းမြန်မာဈေးသစ်ကြီး Diamond Plaza, Yadanar Mall, မင်္ဂလာဈေး ၊ ရတနာပုံဈေးတို့ တည်ရှိသော နေရာကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ ( လိုအပ်ပါက ဖြည့်ပါ ) တန်ဖိုး ၏ ၂ % (ရောင်းသူထံမှ) အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားခြင်း/ခြံခတ်ကာရံထားခြင်း No မီတာဘောက်စ် ( လျှပ်စစ်မီး ) ပါဝင်ခြင်း No ရေကြည် ရေသန့် တွင်း No ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 5850 အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြေအနေအထားရှိခြင်း No ရေသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ No
2400 မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 2400 ft² ရောင်းမည့် မြေကွက် ( (40'*60')စစ-၁၀/၂၂ လမ်း၅၀မေးတင် ၊ ချမ်းမြသာစည် ) * အကျယ်အ၀န်း - 2400 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - ချမ်းမြသာစည် ၊ (40'*60') စစ-၁၀/၂၂ လမ်း၅၀မေးတင် * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - အခြားအမျိုးအစားများ * ဂရံမြေဖြစ်ပြီး * ချမ်းမြသာစည် မြို့ နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူသော နေရာဖြစ်သလို တည်နေရာအနေအထားအရ တန်ခိုးကြီး မန်းလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး နှင့်မလှမ်းသလို အနားယူအပန်းဖြေရန် မန်းလေးကန်တော်ကြီး ၊နာမည်ကျော်ဦးပိန်တံတားတို့ နှင့်နီးသလို ဈေးဝယ်ထွက်ရန် Ocean Super Market နှင့်လည်း နီးသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ ( လိုအပ်ပါက ဖြည့်ပါ ) တန်ဖိုး ၏ ၂ % (ရောင်းသူထံမှ) အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားခြင်း/ခြံခတ်ကာရံထားခြင်း No မီတာဘောက်စ် ( လျှပ်စစ်မီး ) ပါဝင်ခြင်း No ရေကြည် ရေသန့် တွင်း No ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable (ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်) မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 2400 အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြေအနေအထားရှိခြင်း No ရေသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ No
* အကျယ်အ၀န်း - 14400 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - ချမ်းမြသာစည် ၊ (180'*80')ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့်၅၃လမ်းထောင့်၊အောင်ပင်လယ် * ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုချောင်နေရာ * အမျိုးအစား - အခြားအမျိုးအစားများ * ချမ်းမြသာစည် မြို့ နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူသော နေရာဖြစ်သလို တည်နေရာအနေအထားအရ တန်ခိုးကြီး မန်းလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး နှင့်မလှမ်းသလို အနားယူအပန်းဖြေရန် မန်းလေးကန်တော်ကြီး ၊နာမည်ကျော်ဦးပိန်တံတားတို့ နှင့်နီးသလို ဈေးဝယ်ထွက်ရန် Ocean Super Market နှင့်လည်း နီးသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ ( လိုအပ်ပါက ဖြည့်ပါ ) တစ်လ ငှားရမ်းခ (အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားထံမှ) စတင်ဝယ်ယူ/ငှားရမ်းနိုင်မည့် အချိန် Now Available အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြေအနေအထားရှိခြင်း No ရေသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ No ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း (ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်) မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 14400 အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားခြင်း/ခြံခတ်ကာရံထားခြင်း No မီတာဘောက်စ် ( လျှပ်စစ်မီး ) ပါဝင်ခြင်း No ရေကြည် ရေသန့် တွင်း No
4800 ft² ရောင်းမည့် မြေကွက် 40'*120' ( (၅၈) လမ်း၊ ကန်သာယာ ၊ ချမ်းမြသာစည် ) * အကျယ်အ၀န်း - 4800 စတုရန်းပေ * တည်နေရာ - ချမ်းမြသာစည် ၊ (၅၈) လမ်း၊ ကန်သာယာ * အမျိုးအစား - အခြားအမျိုးအစားများ * ချမ်းမြသာစည် မြို့ နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူသော နေရာဖြစ်သလို တည်နေရာအနေအထားအရ တန်ခိုးကြီး မန်းလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး နှင့်မလှမ်းသလို အနားယူအပန်းဖြေရန် မန်းလေးကန်တော်ကြီး ၊နာမည်ကျော်ဦးပိန်တံတားတို့ နှင့်နီးသလို ဈေးဝယ်ထွက်ရန် Ocean Super Market နှင့်လည်း နီးသော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အသေးစိပ်အချက်အလက်များ အကျိုးဆောင်ခ တန်ဖိုး ၏ ၂ % (ရောင်းသူထံမှ) စတင်ဝယ်ယူ/ငှားရမ်းနိုင်မည့် အချိန် Now Available အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြေအနေအထားရှိခြင်း No ရေသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိ / မရှိ No ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်း Negotiable (ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်) မြေကွက်အကျယ်အ၀န်း (ft²) 4800 အုတ်တံတိုင်းခတ်ထားခြင်း/ခြံခတ်ကာရံထားခြင်း No မီတာဘောက်စ် ( လျှပ်စစ်မီး ) ပါဝင်ခြင်း No ရေကြည် ရေသန့် တွင်း No
Email address: realestate@24naryee.com